C/llaahi Sheekh Xasan oo la sii daayey, balse sheegay arrin ka go’an in ..
Gudoomiyaha isbahaysiga nabada C/laahi Sheikh Xasan ayaa xalay fiidkii xabsiga laga sii daayey kadib dadaalo ay bulshada rayidka sameeyeen .
C/laahi oo markii la sii daayey wareysi siiyey idaacada Dalsan ayaa sheegay inuu xur yahay kadib dadaalo axsaabta siyaasada ay sameeyeen iyo ururada bulshada rayidka .
“Xur ayaan ahay mana la i geysan wax jirdil ah intii ay i hayeen ciidamada “ayu ku yiri wareysigiisa. C/laahi ayaa dorraad laga xiray garoonka Muqdisho.
Waxa kaloo uu sheegay in cidii soo xirtayba aanu marnaba ka hari doonin, isla-markaana uu kala xisaabtami doono xarigiisii, oo uu ku sheegay inuu ahaa mid isaga loogu xadgudbay.
Dowladda Federalka ee Somaliya, ayaan ka hadlin xariga iyo sii deysmada C/laahi Sheekh Xasan, oo ah Gudoomiyaha Isbaheysiga Nabadda iyo Dimoqraadiyada, sidoo kalana ka tirsan Siyaasiyiinta degan Magaalada Muqdisho.
Siyaasiga, ayaa waxaa lagu qabtay Garoonka Aadan Cadde, xilli uu safar kaga soo laabtay Magaalada Nairobi ee Xarunta Kenya, iyadoo Nabad Suggidu ay u sheegtay in uu xarig yahay.
C/laahi Sheekh Xasan waxaa shalay la horkeenay Xeer Ilaalinta Guud ee Qaranka, waxaana laga qoray eedemihii lagu soo oogay, iyadoo uu si adag kaga horyimid, isla-markaana waxaa loo qabtay in 21-ka bishaan uu horyimaado Maxkamada Gobolka Banaadir.
DAAWO SAWIRO CAJIIB AH:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo wacdaro ka dhigay..
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacdaro ka dhigay kulan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan de gmada Hilwaa.
Gudoomiye Muungaab ayaa Casho sharaf u sameeyay Madaxweynaha Umadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh, waxaana halkaasi Madaxweynaha kusoo bandhigay arimo aan la filianeyn.
Sheekh Abuu Cabdala “Maalintii Amiirkeena uu nasoo fasaxo dhulka ayaan idin la rogeynaa, taangiyadana waan idin ku gubeynaa”
Sheekh Maxamed Abuu Cabdala, Wakiilka Al Shabaab ee Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa wuxuu sheegay inay sugayaan amar fasax ah oo uu siiyo Amiirka Shabaab, ayna u diyaarsan yihiin weeraro culus ay ku qaadaan ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom.
Abuu Cabdala, wuxuu sheegayaa in hadii Amiirka Shabaab Axmed Abuu Cubeyda uu fasax siiyo ciidamada Shabaab, ay diyaar u yihiin weeraro culus oo dhulka ay kula rogayaan ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda inay geystaan.
“Walaahi hadii Amiirkeena uu na fasaxo waxaan awoodnaa inaan taangiyadiina idin ku gubno oo dhalooyin baasiin ah idin ku holcino, hadii amiirkeena uu dhaho dhulka la roga oo weeraro culus ku qaada waan awoodnaa inaan maalinta cad idin kaga dhigno habeen madoow sida aan rasaas idin kugu holcineyno”Ayuu yiri Abuu Cabdala oo ka hadlaayay fagaaro ku yaalo Degmada Baraawe.
Wakiilka Al Shabaab ee Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sidoo kale ku waramaayo in ciidamada Shabaab ay yihiin kuwa la cel-celinaayo oo ay u diyaarsan yihiin inay dalkooda u dhintaan, iyaga oo la dagaalamaya waxa uu ugu yeeray cadoowga.
Abuu Cabdalla wuxuu sheegay inay weli joogaan ragii weeraray Baarlamaanka iyo mdaxtooyada rag lamid ah oo aan ka cabsaneyn geerida, una diyaarsan inay dhintaan oo xitaa cel-celis ah oo loo sheegaayo in weli Amiirka uusan amar bixin, laguna qancinaayo inay ku sugnaadaan xerooyinkooda ciidanka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wixii ka dambeeyay markii la dilay hogaamiyihii Kooxda Shabaab, waxa ay heegan gelisay ciidamadeeda ammaanka, iyadoo laga cabsi qabo weeraro Shabaab ay ka geystaan Magaalada Muqdisho.
Weeraradii Al Shabaab ay ka geysan jireen Magaalada Muqdisho, ayaa hoos udhac ku yimid, sababo lagu tilmaamay in awoodii kooxda ay noqotay mid sii yaraanaysa oo Milateri ahaan laga adkaaday.
‘’Axmed Madoobe waxa uu howshiisa ka dhigtay nin jecleysi & qabiilkiisa’’…
Garaad Saalax Axmed oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu kasoo cararay Magaalada Kismaayo sababo la xiriira Amni la’aan iyo qaad qaadka Qabyaalada.
Waxa uu sheegay in isaga iyo Siyaasiyiin kale ay kasoo carareen Magaalada Kismaayo kadib markii shaqada Axmed Madoobe ay kusoo biyo shubatay qancinta Reerkiisa, sida uu hadalka u dhigay.
Isaga oo arrintaasi ka hadlaayay ayaa waxa uu yiri ‘’Aniga iyo dhowr waxgarad oo wax kasoo dhisay Maamulka KMG Jubba ayaa waxan Axmed Madoobe ku khilaafnay qaabka uu wax u wado, waayo waxa uu howsha oo idil ka dhigay jufo-jufo iyo nin garabeysi, ilaa hadda waxa uu garan waayay inuu Odayaasha soo doortay la kulmo’’
Garaad Saalax Axmed waxa uu sheegay in waxbadan uu ka bartay Axmed Madoobe, balse ay wakhti siin-doonaan si uu u garwaaqsado qaladaadkiisa, waxa uuna uga digay inuu kusii fogaado nin jecleysiga, sida uu Garaad Saalax Axmed hadalka u dhigay.
Sidoo kale, Nadiifo C/llahi waxa ay kamid tahay Waxgaradkii soo xulay Axmed Madoobe waxa ay iyana ku eedeysay Axmed Madoobe inuu yahay ruux aan kala garaneynin wanaaga iyo xumaanta, iyadoona ay tusaale usoo qaadatay qaab dhaqameedkiisa xiliyada uu qaabilaayo madaxda Maamulka ama Odayaashii soo doortay.
Waxa ay tilmaantay in Axmed Madoobe uu dayacay kalsoonidii Odayaasha iyo hablaha ka shaqeynaayay soo bixitaankiisa, waxa ayna sheegtay in Sokeeye iyo xigaalba uu ka dhigtay reerkiisa.
Iyada oo arrintaasi ka hadleysay ayaa waxa ay tiri ‘’Wey adagtahay in lala shaqeeyo ruux ay ku ween tahay jufadiisa, waayo waxa uu wakhti u la yahay Siyaasiyiinta iyo waxgaradkii isaga soo doortay, haddii Axmed Madoobe uu kasoo laaban waayo arrinkaasi ma filaayo in Jubba ay ka bixi doonto dhibaato iyo reer reer ku duulay.
Haddalka Nadiifo iyo Garaad Saalax Axmed, ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ay Odayaashii ku jiray shirka Kismaayo badi ay u kala carareen, shirka ka furmaayo Gobolka Gedo, kaasi oo looga soo horjeedo Maamulka Axmed Madoobe.
Qorshaha Cabdi Iley iyo siyaasaddiisa
Ma ogtahay in aad is hubsataa iney haboontahay. Ma ogtahay, Ciyaar aanad khibrad u lahayn, qawaaniinteeda aanad korka ka wada xafidsaneyn in aanad badin kareynin. Ciyaartaasi ha ahaato: Kubadda Cagta, Kubadda Koleyga, Feedhka ama Orodadaba. Waxaa iyana la mid ah Qawaaniinta Ciyaarta Siyaasadda oo la hubo in aaney marnaba guuli kugu raaceynin Ficillo ku saleysan: Laablakac, Quudareyn iyo Deg-deg. Mase ogtahay in aaney xisaabta Siyaasadda ku jirin, In nin aan kuu furi doonin uu kuu raro.
Sida aad ka dha-dhansan kartaan Cutubka u horeeya Maqaalkani waa mid Siyaasadeysan, kuna wajahan oo ku kooban Garaadka Siyaasiyan u bisil ee garankaraya Nuxurka iyo ujeedada Qoraalkani xambaarsanyahay.
Nicmooyinka ilaahey inoogu deeqay waxaa ka mid ah: Maskaxda iyo Caqliga.
Waa labo isku mid ah, hadana kala mid ah. Maskaxdu waa wax la arki karayo, lana taaban karo. Caqligase lama arki karo lamana taaban karo.
Maskaxda Xayawaankuba wuu leeyahay. Caqliguse waa ka,hadeynu nahay Basharka aynu Xayawaanka kaga duwannahay ee ilaahay inagu maneystey.
Ilaah baa dheeqda bixiyee, sida ilaahey Bani Adam kiisa u kala fadiley ee uu ugu kala badiyey wax kasta sida Cimriga, Caafimaadka, Arsaaqadda, Awlaadda iyo Darajada, Ayuu Caqligana ugu kala badiyey.
Ilaahey Basharkiisa qaarkood wuxuu ku maneystey, Caqli badan. Kuwana wuxuu siiyey Caqli meel dhexaad ah. Kuwo kalena wuxuu siiyey Cqli yar.
Basharka ilaahey Caqli badan ugu deeqo.waxaa lagu gartaa oo astaamo u ah Sifooyinkan:
Waa qofka curiya amaba keena Fikrado ama xeelado lagaga hortagi karo Mushkilado ama dacdooyin dhibaatooyin xambaarsan oo uu saadaalin karo. Waa qofka ku mashquula waqtigiisana ku lumiya Danihiisa, Danaha dadkiisa, Danaha Dalkiisa iyo Aaraa’da Cusub ama Curinta iyo Hirgalinta Fikrado Cusub oon horey loo arag iyagoo kale (New Ideas & Inventions) ee loogu dhawaan karo, loogana faa’ideysan karo dhinaca Horumarka Bulshada ee dhankastaba ah.
Kuwaasoo ay kamid yihiin kunase koobneyn:
Aasaaska ciidamo aan horey u jirin, sida Liyuu Booliska oo aynu wada ognahay in ay ku dhismeen fikir ka soo maaxdey Maskaxda Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar.Dhismaha Liyuu Booliska waxaa laga dhaxley in maanta Deegaanka Soomaalidu uu noqdo ka ugu ammaanka wanaagsan Dalka Itoobiya guud ahaan.Iyadoo ka dib soo afjariddii dhaq-dhaqaaqyadii Nabadiidka, ay markii ugu horeysey suuragal tahay in aad nabadgalyo iyo wel-wel la’aan aad ku seexato kuna soo toosto meel kasta ood kaga nooshahay Deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaad nabadgalyo iyo ammaan ku mari kartaa meel kasta oo Deegaanka ka mid ah, Miyi iyo Magaalaba.
Tababaridda iyo dhiiri galinta Kadir Dhalinyaro ah oo xirfad u lah iney la wareegaan hogaanka heer Deegaan, Gobol iyo Qabaleeba. Taasoo aan dhici jirin wixii ka horeeyey Hogaaminta Madaxweyne CMC
Horumarinta iyo baahinta Hay’adaha iyo laamaha Waxbarasho ee kala duwan oo la gaadhsiiyey dhammaan Gobolada, Degmooyinka iyo Qabaleeyada uu ka koobanyahay Deegaanka Soomalida Itoobiya.Hirgalinta Jaamacadaha kala duwan ee ka howlgaley Gobolada Deegaanka Soomaalida Itoobiya.Iyo hirgalinta Jaamacadda weyn ee Jigjiga oo ay ka faa’ideystaan ardey ka timaada dhammaan Gobolada iyo Degmooyinka uu Deegaanka Soomaalida Itoobiya ka koobanyahay iyo waliba ardey ka timaada, Maamuladda aynu jaarka nahay sida Maamul goboleedtyada kale ee ka jira Dalkeena Itoobiya.waxaa iyana ka faa’ideystey Fikirka Jaamacadda Jigjiga Ardey ka kala timid:
Somaliland, Puntland, Galmudug, Jubaland iyo meelo kale oo kawada tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee aynu walaalaha nahay. Waana fikir cusub oo la curtey Madaxweyne CMC.
Iyada oonan halkan mid-mid ugu soo wada koobi Karin Fikradaha caafimaadka qaba ee faa’iidada leh ee ka soo maaxdey Maskaxda Madaweyne Cabdi Iley, waxaa ka mid ah:Hirgalinta barnaamijka Xoolo dhaqato Beeraleyda, tayeynta iyo daryeelka xoolaha Deegaankeena iyo hirgalinta siyaasadaha Suuqgeynta Xoolaha nool, Hilibkooda iyo Caanahoodaba oo ah fikrad cusub.Horumarinta dhinacyada Biyaha oo uu Madaxweynuhu ahmiyad gaar ah siiyey.Horumarinta dhinacyada Jidadka, Korontada, Kaabayaasha Dhaqaalaha.
Horumarinta iyo tayeynta adeegyada Caafimaadka.
Horumarinta iyo tayeynta aqoonta iyo xirfadaha Shaqaalaha Dowladda iyo wacyigalinta Bulshada ee ku aadan ka qaybqaadashada Barnaamijyada horumarineed ee uu Madaxweyne Cabdi Iley ka hirgalinayo Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Arrimaha ugu muhiimsan ee ka midka ah Siyaasadaha iyo Fikradaha Cusub ee ka soo maaxdey Maskaxda Madaxweyne Cabdi Maxamuud waxaa ka mid ah:Hirgalinta iyo aasaaska Xafiisyada: Qorbojoogta iyo Maalgashiga.Fikirkan oo ah mid aad loogu diirsadey oo ay si wada jir ah u soo dhoweeyeen Bulshada u dhalatey Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Qurbaha ku nool iyo kuwooda la dhashay ee iyana Dalka gudihiisa ku nool.Waa Siyaasad iyo Fikir cusub oo uu Madaxweyne CMC hirgaliyey kuna dhiiri galiyey Qurbojoogta Deegaanka u dhalatay in ay markii ugu horeysay u soo hiloobaan in ay dib ugu soo laabtaan Dhulkoodii Hooyo .
Waa Fikir horseeday in ay la xidhiidhaan kuna dhiiradaan in ay maalgashi ku sameystaan iyaga oo ogaadey xaaladda dhabta ah ee uu ku suganyahay Deegaanka ay u dhasheen oo ay Been iyo Cabsigalin aan sal iyo raad toona lahayn ay ka faafin jireen kuwa nabad diidka ahi.
Nabadiidka oo aan jeclayn wadada nabadgalyada iyo horumarka ee uu cagta saarey Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu Madaxweynaha ka yahay Mudane Cabdi Iley.
Waxaa kale oo wax aad loogu diirsaday noqdey Fikirka caafimaadka qaba ee ka soo maaxdey Maskaxda Madaxweyne CMC ee ah la xisaabtanka Mas’uuliyiinta kala duwan ee Deegaanka Bulshada horteeda iyadoo Bulshada kale ee Qurbojoogta ah ee u dhashay Deegaankuna ay ka Daawadaan Telefishanka ESTV ee lagu hirgaliyey Fikirka Madaxweyne Cabdi Iley.
Cabdi Iley waa Hogaamiye Dawga yaqaan, Dawga mara, Dawgana Bulshada tusa.
Waa Hogaamiye si geesinimo leh ugu istaaga una yidhaahda weedha uu damco.
Isla markaana waa Hogaamiye si geesinimo leh ugu fadhiista una dhageysta weedha lala damco.
2. Basharka ilaahey Caqli Dhex-dhexaad ah ugu deeqo.
Waxaa lagu gartaa oo astaamo u ah sifooyinkan:
Waa qofka ku mashquula waqtigiisana ku lumiya waxyaabaha iyo dhacdooyinka, amaba mushkiladaha markaa taagan.
Waa qofka wax ku qaata dhacdooyinka u markaa arko, kana faaideysta khaladaadkiisa.
Waa qofka aan qof kale danihiisa seejin Karin.
Waa qofka kala garta ruuxa u roon ee dantiisa ka shaqeynaya iyo ruuxa u daran ee lugooyadiisa ka sheqeynaya.
Waa qofka abaalka gala hadii loo galana guda.
Basharka ilaahey Caqli Yar ugu deeqo.Waxaa lagu gartaa oo astaamo u ah sifooyinkan:
Waa qofka aan caqli badan laheyn kuna mashquula waqtigiisana ku lumiya Dadka kale. Waa ka aan waxbaba curin Karin danihiisana ku halleeya cid kale.
Waa qofka aan ka dhamaanin wax ka sheega Bulshada uu markaa la noolyahay. Hadey yihiin Mas’uuliyiin iyo hadey yihiin bulshada inteeda kaleba. waa kuwa la dhex yuurura Bulsha Been abuurka iyo Dacaayadaha raqiiska ah.Nin aan naaneys laheyni waa Ri aan geeso laheyn.Caqli yari awgeed, waa kuwa u haysta cay iyo dacaayad markey Madaxweyne Cabdi Iley ugu yeedhaan madaxweneCabdi iley.
Waa kuwa aan kala garan mas’uuliyadda Maamulka deegaanka iyo Mas’uuliyadda Hogaanka Dowladda Federaalka ah. “Who does what?Oo macnaheedy yahay, Shaqada iyo Mas;uuliyada sida loo kala leeyhay, heer Federaal iyo heer Deegaan.Waa kuwa ficil iyaga wax tar u leh ka quudareeya meel aaney ka heli Karin.
Waa kuwa quudareeya amaba rajeeya wax aan macquulba aheyn iyagase aan ilaahey galinin Caqli ay ku gartaan ama ku dareemaan.Waa kuwa hafra Dowladda dhexe, Caqli yariduna u geysey in ay aaminaan wax aan Mas’uuliyadda Dowladda dhexe aheyn in ay ka quudareeyaan oo ay isaga daba noq-noqdaan Adis-Ababa.
Waa kuwa igagoo laga dhigey wax aaney u qalmin, hadana kala garan la’a halka dantoodu ku jirto iyo halka ay ku fashilmi karaan oo dhaxalsiinkarta in ay Noloshaba kaga dhacaan.
Waa kuwa iyagoon qawaaniinteeda baran, laab la kac iyo aqoon la’aani marba meel ka tuureyso, oo sidii odey dhaqameedyadii aan Siyaasadda ehelka u aheyn marba meel aan dantoodu oolin waxna looga qaban Karin dacwad iyo calaacal la hor taagan.Waxa qudha ee ay ka dhaxlaani ay tahay quudhsi marka la arko garaadkooda siyaasadeed heerka uu isku taagey ee uu dhaafi kari waayey.Iyadoo la wada ogyahay dadaalka iyo waqtiga badan ee uu Madaexweyne Cabdi Maxamuud galiyey sidii uu kor ugu soo qaadi lahaa aqoontooda qawaaniinta Siyaasadda, iyo Dastuurka dalka iyo Deegaanka iyo sida ay Mas’uuliyadaha u kala leeyihiin Dowladda Dhexe iyo Dowladda Deegaanku.Waa kuwa marka Geel loo heeso iyagu Goroyo u heesaya. Waa Kuwa soo joogsada inta laga waayey, maanta soo jiifsada laga heley.
Qasiirku inuu basiir yahay caad igama saarna.
Waa kuwa wax badso aan Caqli wadani wax la’aanta dhaxalsiisey.
Balaayo daan la qabto ayey leedahay ee dabo la qabto ma laha.Waa kuwa la moodey noqonse waayey.Waa kuwa shaqo oo dhan ku koobey wax ka sheega iyo dacaayadaha Madaxweynahooda Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo hurinta colaado dhex mara Bulshada walaalaha ah ee nabadda ugu wada nool Deegaanka Soomaalida Itoobiya.Wax yaabaha been abuurka ah ee hadda lagu bartay ee ay Bulshada la dhex joogaan ee ay maalin walba soo qoraan waxaa ka mid ah:
Cabdi Iley baa hebel xidhaqy. Cabdi iley baa hebel weeraray. Cabdi iley baa reer fulaan xasuuqay iyo Cabdi Iley baa Dhiiganaga cabbey.
Xurmadle odayaasha deegaanka ka mid ahaa aseenan halkan hadda magaciisa ka sheegeynin ayaa alla ha u naxariistee waxay kuwo wax ma garato ah oo ka mid ah kuwa ilaahey Caqliga ku yereeyey, mar walba ku eedeyn jireen oy odhan jireen:
Odey fulaanbaa dhiiganaga cabba.
Markaasaa odegii wuxuu yidhi:
War laga soo bilaabo maalinkii hogaanka beesha la ii caleemo saarey illaa maalinkaa maanta ah waxey ila daba joogaan,” Dhiiganagii buu cabbeye” Dhiigoodu mid dhammaadaba miyuusan aheyn.
Hadda kuwo siyaasiyiin isku sheeganaya aseen anigu u aqaano Nirgaha Jigjiga oo ilaahey Caqliga ku yareeyey, iyo kuwo kale oo iyaguna meelahaa (xigmad ma qoraane) wax ku malmaluuqa ayaa waxay meelahaa ku daabacaan: Madaxweyne Cabdi Iley iyo General Cabdiraxmaan Laba go’le ayaa dhiigana cabba.
hadaba waxaan leeyahay waa kuwii odeygu sheegay oo kale eh, Dhiigoodu hadii intaa la cabbayey, mid dhammaadaba miyuusan aheyn.
Waxyaabaha ay soo malmaluuqeen ee ay bulshada nabadda iyo Ciidankoodaba jecel ay isleeyhiin waad ku kicin kartaan oo waad ku kala dili kartaan Bulshada iyo Ciidankooda, waxaa ka mid ah:
General Cabdiraxmaan Laba Go’le ayaa odayaal la shireen. Oo odayaashii buu aflagadeeyey oo wuxuu ku yidhi hadeydaan dhaleyn waa in la idiin dhalaa.
Ogaada Bulshoy arintaasi waa been abuur aan sal iyo raad toona laheyn.
Waa hadal Caalamka carabta caan ka ah oo horey loo wada maqlay.
Waa hadalkii ama erayadii sababta u ahaa dagaalka sokeeye ee ka taagan Dalka Suuriya.
Odey ka mid ah odayada magaalada Xalab ee Suuriya ayaa hadalkaa waxaa ku yidhi Hogaamiyihii Ciidamadii ku sugnaa magaalada Xalab.
Ninka eedeyntan beenta ah doonaya inuu ku xumeeyo General Cabdiraxmaan Laba Go’le si uu ugu beerlaxowsado, colaadna uga dhex beero bulshada Deegaanka ee nabadda jecel, hubaal waa nin Qisadan oo Af carabiya akhriyey.
Caqligaase ku yare waa inuu ogaadaa hadduu balaayo huriyo in aaney jirin cid isaga uga futo xumi.
Ninbaa waxaa laga hayaa:
Maalinbaan aad u ooyey. Waxaase iiga darraa, maalintaan u ooyey Maalintii hore ee aan aadka u ooyey.
Waxaan saadaalinayaa niman maanta aad u ooyaya oo maalin kale oo soo socota Maanta u ooyi doona.
Canaan ka yaab reer ma doojo. Waa kuwan aan waxba curin kareynin. Tallaabo siyaasadeedna aan qaadi kareynin, hadey qaadaana guuldaro iyo fashil uun kala kulma.
Khilaaf kasta oo yimaada, laguma xalin karo isla aragtidii aad qabtey markii uu khilaafku yimid. Ninka ilaahey Caqli ku filan siiyeybaa odhaahdaa fahmaya.
Madaxweyne Cabdi Iley wuxuu ku guuleystey qorshihiisii siyaasadeed ee uu kaga hortagayey Daankana ku qabanayey balaayada ay Deegaanka u saadaalinayaan kuwan Caqligu ku yaryahay ee miciinka moodey kuwo aan haba yaraatee waxba uga qaban Karin arrimo u khaas ah Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waxaanan guul u rajeynayaa Shirka 8aad ee XDSHSI oo dhowaan ka furmi doona Xarunta Gobolka Nogob ee Fiiq.
Barta Qawaaniinta Siyaasadda, si aydaan isaga taagin siyaasadda dhanka khaldan, markaad aragtaan Madaxweyne CMC oo ka taagan dhanka saxa ah.
W/Q: Abduljabar Sh. Dahir
SHABAAB oo fal naxdin leh ka geystay gobolka Shabeelaha Hoose (Aqriso)
Maleeshiyada Alshabaab ayaa waxa ay Afar ruux ku fuliyeen dil, kadib markii ay ku eedeeyen inay ahaayen Basaasiin la shaqeyneysay DFS iyo Ethiopia.
Dilka afarta ruux, ayaa waxa uu ka dhacay Gobolka Shabeelaha Hoose, iyagoona sheegay in baaritaano dheer kadib ay ragaasi ku cadaatay Eedeymaha loo soo qabtay.
Dhalinyarada dilka lagu fuliyay ayaa waxaa lagu kala magacaabayay:-
1-Mahad Xasan Ciise oo da’diisu aheyd 26 sano jir wuxuu ku eedaysnaa in uu la shaqeynayay a hay’adda CRD iyo Nabad sugidda Dowladda Xasan Sheekh.
2-Xasan Xaaji Aawow oo da’diisu aheyd 27 sana jir ayaa lagu helay in uu katirsanaa Ciidamada Qaranka gaar ahaan kuwa loo yaqaan Alpha Group.
3-Iidle Max’med Xasan oo 18 sana jir ahaa waxaa lagu eedeeyay inuu wada shaqeyn lalahaa Ciidamada Nabadsugida DFS.
4-Axmed Max’med Aadam ayaa isna lagu Eedeeyay inuu ahaa Sirdoon la shaqeynaayay Ciidamada Ethiopia.
Dhanka kale, Arrintaani ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Max’med Abuu Cabdalla Guddoomiyaha Shabeelaha Hoose u qaabilsan Maleeshiyada
Alshabaab, waxa uuna kadigay in dhalin yarada ay ku deg degaan waxyaabaha lidka ku ah Alshabaab.
Isagoo meel fagaaro ah kula hadlaayay dad shacab ahaa, ayaa waxa uu xukunku ku sheegay mid waafaqsan diinta, waxa uuna digniin hor leh udiray dadka howlahaasi ku howlan.
C/WELI gaas oo aan cago ku taagneyn, xaal halis ahna dhex taagay Puntland
C/Weli Gaas wuxuu ku wanaagsan yahay sida cadaawo loo abuurto.
Dadka ku dhaqan Puntland waxaan filaa inaysan weli dareemin falfal xumada uu ku dhaqamaayo Madaxweynahooda oo aad ugu wanaagsan sida loo abuurto cadaawo.
Maanta Puntland waxay ku sugan tahay halis ah in umadda ku nool uu ku habsado bur-bur iyo barakac aad u baaxad weyn oo aysan weligood ka fikirin, waayoo Ina Gaas wuxuu cadaawo ka sameystay Somaliland iyo Galmudug waana labada gobol ay kala dhexeyso xuduuda, dowladda dhexena wuxuu ula dhaqmaa sidi iyagoo ku nool meel ka baxsan Somalia.
Wuxuusan ogeyn C/Weli in labada maamul goboleed ee xuduuda kala dhexeyso inay ku qabsan karaan Puntland saacado kooban waa haddii la is-fara saaro..cid u soo gurmaneynsana u maleyn maayo inay jirto!!! Waxaa laga yabaa inay isku halleynayaan Ethiopia oo ay gacal moodeen, iyagoo illawsan wixi dhex maray Mengistu Haile Mariam iyo Cabdullaahi Yuusuf berigii SSDF..taasoo Cabdullahi loogu hambalyeeyay askarta uu dilay oo la yiri marba haddii aad disheen askar Somali ah waad guuleysateen.!!!
Nasiib darrada heysata siyaasiyiinta Puntland waa iyagoon marna ka horimaan karin tallaabooyinka qallafsan ee Madaxdoodu qaadeyso. Waa dadka qofkooda khaldan aan la toosin oo waxay aaminsan yihiin in qofki iyaga ka mida oo gef sameeya inuu saxsan yahay waa isma ceshato aan wax badan is-dhaamin.
C/Weli Gaas wuxuu dareemay khatarta ku soo socota mar hadduu cadaawo ka samyestay Galmudug oo ah dad mudan in wanaag loola dhaqmo, markey cadaawo arkaanna aan wax celin karaa aysan jirin, dadka Puntland ee waxgaradka ah waa ogyihiin dadkaasi waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan.
Qaybdiid meelo badan ayaa looga soo duulay oo laga codsaday inuu demiyo dabka uu shidaayo C/weli Gaas oo ismooday wax uusan ahayn, wuxuu mudan yahay waa yaqaaniin reer Galmudug.
Cabdi Qaybdiid meelo badan ayaa lagala soo xariiray si uu baajiyo ama badbaadiyo dadka maatada ah ee meesha ku nool, waana oggolaaday inuusan bilaabin xabbadda, waayoo waa askari yaqaanna dhibaatada dagaalku leeyahay.
C/weli Gaas ma yaqaanno in dagaal si loo billaabo ay sahlan tahay, laakin si loo joojiyo ay aad u adag tahay.
Waa run inuu Jaamicad ka baxay laakin waxba kama kororsan wuxuuna ka soo baxay isagoo ka aqoon yar Faroole oo ahaa jaahil aan wax baran (uneducated), laakin yaqaan meesha ay khatarta ka imaan karto. C/weli wuxuu cadaawada u abuurtay inuu dadka dega Puntland oo aad u saluugsan kana soo horjeeda siyasadihiisa inuu mideeyo isagoo ku andacoonaya inay jjiraan cadaawo duullaan ku ah Puntland.
Dad wax taxliiliya qaarkood ayaa aaminsan in C/weli Gaas uusan u baahneyn cadaw dibadda ka ah gobolka, balse asagu u yahay cadawga ugu weyn ee maanta ka jira Somaliya, Shabaab waxay galeen booska labaad.
Ina Gaas waa aragyay maanta inuu taagan yahay SHAFAA XUFRAH Godka Qarkiisa uuna khatar ugu jiro inuu ku dhoco godka iyadoon cidina u soo gurman doonin. Waxaa talo naga ah C/weli inaadan iska dhigin nin kaligiis noolaan kara ood u baahan tahay dowladda dhexe ood maanta hoos fadhido adigoo baryaaya in la demiyo debki aad shiday.
Waxaa habboonaan lahayd inay dowladda dhexe ku hor dhigto shuruudo aanu diyaar u nahay diyaarintooda si looga badbaado ku takri falka aad cadeysatay, erayada iyo afcaasha aadan ka fiirsan..Raadso cid kula talisa oo adiga kaa aragti fiican kuwaasoo aan hubno in laga heli karo Puntland haddii is-faqooqida laga daayo maamulka gobolka dhexdiisa, qof kastana wixi ay taqaanno laga faaiideysto iyadoon la fiirin jufada hoose uu ka soo jeedo. Farqiga idiin dhexeeya adiga iyo Cabdi Qaybdiid waxay tahay isaga si aan ganbasho lahayn ayuu u sheegaa waxa uu damacsan yahay, waana qof go’aan leh oo markasta ku dheggan mowqifkiisa mahmaa kaan !!..adigana waxaad ka baqeysaa inaad qirato cabsida ku gashay aadna raadineyso si aad uga badbaado dhibaatada ay abuurtay garaad yaridaada.
Taasna waxay tilaam u tahay inaad ka arradan tahay tilmaanta zaciim nimo oo looga baahan yahay qok kasta ee xil culus qaadda Laga yaabee inad Puntland bohol ka tuurto hadhowna aad inkirto adigoo dhahaya anigu sidaa u lama jeedin…Bal hadda caddey mowqifkaaga siyaasaddeed, cadaawada aad abuurtayna u raadso dad cilmi iyo aqoon u saaxiib ah oo kaala taliya tallaaboyinka aad qaadi doonto mustaqbalka.
Marna ha u maleyn C/weliyow inaad gobollada kale ee dalka ka horreysid am ka fiican tahay.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Jornalizem.com
Tarsan oo sheegay hal arin oo qatar ku ah qaranka SOMALIA (Aqriso)
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa sheegay in dalka Somalia uu faraha kasii baxaayo.
Tarsan ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in Qaranka Somalia uu xiligaani ku jiro Khatar laga yaabo inay sababto dib ugu laabashada dalka 23-sano ka hor, waa haddii uu yiri aan laga hor tagin wax waliba oo lid ku ah Jiritaanka Somalia.
Qoraal uu bartiisa Facebook kusoo daabacay ayaa waxa uu ku sheegay in isaga fakir ahaan uu u arko Khatarta qaranka Somalia heysata inay tahay Musuq-maasuqa caadada ka noqotay Dalka, taasi uu ku sheegay inay soo dadajineyso burburka dalka. Nuqul kamid ah qoraalkiisa ayaa waxa uu u qornaa ‘’ Aniga aragti ahaan khatarta ugu weyn ee haysata jiritaanka qaranimada Somalia waa musuq-maasuqa ‘’Corruption’’ baahsan oo sharciyeysan ee ka jira wadanka.taas oo ku faafsan halbowlayaasha dowladnimada Somaaliyeed. musuq-maasuqu wuxuu ka khatarsanyahay dhibaatada ay ururada argagixisadu ku hayaan dalka Somaliyeed’’ Sidoo kale, waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in Musuq-maasuqa uu ka awood badan yahay dhibaatooyinka ay Maleeshiyaadka Alshabaab u geysanayaan Bulshada.
Dhanka kale, Tarsan oo Halista Qaranka heysta ku sheegay qodobka Musuq-maasuqa, ayaa waxa uu DFS ugu baaqay inay inta karaankeeda ka fiirsato, waxa uuna kadigay in loo adeegsado Hantida Qaranka.
Waxaa dhintay safiirka Soomaaliya ee..
Waxaa xalay abaarihii 1:30Am magaalada Qaahira, ee Dalka Masar ku geeriyooday Safiirka Soomaaliyeed ee Wadanka Masar Cabdullaahi Xasan Maxamed oo ku magac dheeraa “Koofi Dheere” Allah u naxariisto Danjire Koofi Dheere waxaa saakay abaarihii 11:00Am ku soo booday xanuun degdeg ah isagoo horay u qabay cudurada macaanka iyo dhiig karka.
Nasiib darro waxa uu galay koomo isagoo loo la caray isbitaal ku yaalla duleedka magaalada madaxda Masar ee Qaahira, hase yeeshee marxuumka tiisii ayaa gashay oo kama kicin xanuunkaa isaga ah.
Danijre Cabdullaahi Xasan waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, howl kar ah, oo in badan ka soo shaqeeyay wadankii hooyo.
Cabdullahi Xasan waxaa lagu xusuustaa in uu ahaa Danijreyaasha fara ku tiriska ah ee xilka safiirnimo hayay muddo ka badan 30 sano.
Taana waxaa la sheegay in ay ka dambeysay maadaama uu ahaa nin shaqadiisa si wacan uga soo baxay oo qof u dhigantaa oo howshiisa qaban karto loo waayay.
Allah U naxariisto geeridiisa waxaa aad uga naxay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Wadanka Masar.
Hadda wali lama sheegin goorta iyo meesha uu aaskiisa ka dhici doono, hase ahatee waxaa loo maleynaayaa in sidii dardaarankiisa ahayd lagu aaso Iimeey Bari ee Ismaamulka Soomaaliyeed ee Ethiopia oo ah degmada uu ku dhashay. Allah u naxariisto Danjiraha, Familkiisa, Xukuumadda iyo Shacabka Soomaaliyeedna Samir haka siiyo. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar waxay si gaar ah ugu tacsisyeyneysaa familka Safiirka.
Madaxa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar Qaahira. 30.09.2014
Axmed Maxamed Xuseen. Xafiiska JSM.
KENYATTA oo laga gaaray go’aankii uu ka cabsida qabay laguna amray inuu…
Maxkamada Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ayaa Talaadadii (30-kii September) diidday codsi ka yimid qareennada Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata kaas oo ahaa in looga cududaaro in uu goob-joog ka ahaado dhageeysiga dacwadda ee todobaadka soo socda, iyada oo sheegtay in dacwaddu marayso “marxalad xasaasi ah”.
“Maxakamadda ayaa si aqlabiyad ah ku gaartay in dalabaadka caddaaladeed ee dacwaddan eey muhiim ka dhigayso in eedaysanuhu xaadir ku yahay maxkamadda,” ayay tiri ICC-da xarunteedu tahay The Hague sida ay warisay AFP.
“Maxkamaddu waxay tix-galin siisay in shir-xaaladeedku uu ‘marxalad xasaasi ah’ ka yahay habsami-u-socodka,” ayay raaciyeen xeer-beegtida ka kooban saddexda garsoore.
Bilawgii bishan ayay garsoorayaashu waxay joojiyeen in 7-da October la bilaabo maxkamadda Kenyatta lagu saarayo dambiyada ka dhanka ah aadaminimada kadib markiixeer-ilaalintu waydiisatay in dib loogu dhigo xilli aan cayinneeyn illaa ay Nairobi soo gudbisay dokumenti ay rumaysteen in uu taageerayo dacwaddooda.
Garsoorayaasha ayaa taa baddalkeeda u muddeeyay shir xaaladeedka go’aan qaadashada 8-da October waxayna ugu yeereen Kenyatta in uu soo xaadiro.
Qareennada Kenyatta ayaa markaa kadib codsaday in loo cududaaro, iyaga oo cuskaday shir-madaxeed ka dhacaya Kampala, Uganda, oo muddaysnaa isla maalintaa oo ay tahay in Kenyatta uu ka qayb-galo “ka sifadiisa Madaxweynaha Kenya iyo guddoomiyaha Madaxweynayaasha Bulshada Bariga Afrika”. Waxay raaciyeen in safarkiisa uu qorsheeysnaa ka hor inta aan la muddayn shir xaaladeedka.
“Maxkamaddu garowshiyo uma helin codsiga qareennada difaaca ee ku aaddan in eedaysanuhu horay u lahaa ballamo la qorsheeyay ka hor wakhtiga la qabanayo shir xaaladeedka,” ayay yiraahdeen garsoorayaashu.
Kenyatta, oo 52-jir ah, ayaa waxa uu ICC-da ku waajahayaa shan dacwo oo la xiriira kaalintiisa la sheegay in uu ku lahaa abaabulkii colaadihii daba socday doorashooyinkii Kenya ee 2007-2008-dii.
Waxay noqonaysaa markii ugu horraysay ee uu Kenyatta ka soo muuqdo maxkamadda isaga oo madaxweyne ah, isaga oo si joogto ah ugu doodi jiray in uu u baahan yahay in uu baaqi ku ahaado Kenya si uu ula dagaallamo al-Shabaab isla markaana u maareeyo arrimaha dalka.
Turkiga oo Idaacada Ka Furtay Muqdisho & Sirta Ku Duugan oo Lahelay
Waxaa soo baxay Warar sheegayay in Dowladda Dalka Turkiga ay Idaacada FM ah ay ka furatay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya.
Illo lagu kal soonaan karo oo ka mid ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa noo sheegay in Dowladda Dalka Turkiga ay Idaacad FM ah ay ka furteen Magaalada Muqdisho,taasi oo baahin doonta Wararka iyo Mashruucyada Turkiga uu ka wado Magaalada Muqdisho.
Idaacada oo Wali aan Magac loo bixin ayaa hada qaab Tijaabo ah ugu jirta hawada,waxaana ay ka soo gashaa Moowjada ah 102.50MHZ.
Dowladda Turkiga ayaa Goobo Muhiim ah oo ku yaala Caasimada hada Gacanta ku haya oo ay kamid tahay Dekadda Magaalada Muqdisho,iyadoona sidoo kale Guri aad u baaxad weyn uu ka dhisanayo Turkiga Xeebta Magaalada Muqdisho.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa qaba Fikarka ah in Dano Fog oo Siyaasadeed uu Turkiga ka leeyahay Dalka Soomaliya oo 23-Sano Burbur ku jiray Dalkiisuna uu Qeyraad Ceegaago ama uu ka Buuxo.
XOG:-Maxaa sabab u ah Qilaafka Xasan sheekh & Muungaab?.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho Xasan Mungaab iyo madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa waxaa ka dhex aloolsan khilaaf horseedi doona in Muungaab uu xilkiisa waayo, ilo xog-ogaal ah ayaa sidaas inoo sheegay.
Muungaab oo ah nin dhalinyaro ah oo saaxada siyaasada ka soo galay dhanka ciidamada ayaa la rumeysan yahay inuu ka mid yahay ama ugu yaraan ku xiran yahay dawladii hore ee KMG ahayd hogaankeeda, taasoo dadka u yaqaaneen “Aala Sheekh”
Ilo wareedka ayaa xusay in halka madaxweynaha iyo Muungaab iska arkeen ay tahay ololayaal siyaasadeed oo la sheegay in Mungaab uu gaarkiisa u wato kuna doonayo inuu kaga qeybgalo doorashada madaxtinimada 2016, taasoo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qudhiisu uu u sharaxan yahay.
Ololaha Mungaab ayaa dhowaan bannaanka yimid kadib markii uu hadallo ka jeediyey safaro uu ku tagay wadamada Sweden iyo Turkiga,
La taliyaasha Villa Soomaaliya ayaa ku qanciyey madaxweynaha inuu isbedel ku sameeyo maamulka Gobolka Banaadir ee hadda jira ugana faa’ideysto deminta ololaha doorasho ee uu Muungaab hadda bilaabay, kaasoo loo arkay inuu caqabad weyn ku noqon karo ololaha madaxweyne Xasan Sheekh ee doorashada 2016 oo dabcan u baahan in qofkii Muqdisho maamulkeeda haya uu gacan ka geysto, maadaama ay tahay xarunta dalka doorashadana ka dhacayso.
Kulan toddobaadkan ka dhacay hoyga Imaamka Guud ee Mudulood uuna ka qeybgalay C/laahi Sanbaloolshe ayaa nuxurkiisa lagu sheegay in Imaamka lagu qancinayey inuusan ka hor imaan xil ka xayuubinta ku iman karta Muungaab, maadaama Sanbaloolshe oo reer Hiiraan ah loo dhiibi doono xilka Muqdisho,
Si kastaba, ka hor imaadka beelaha ay ka hor iman karaan isbedelada dawladu wado ayaa ah kuwo ka yar intii hore, waxaana taaso loo sababeynayaa in madaxweyne Xasan Sheekh uu dhawaanahan ku tumanayey xuquuqda beeshiisa, taasoo kentay in kalsoonida lagala laabto
R.W.C/wali sheekh oo baarlamaanka Raali Galshay”Sawiro”..(Maxaa qaldamay)
Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Ra’isulwasaarha iyo xubno ka tirsan golaha Wasiirrada weeydiiyey su’aallo la xiriira wareejinta shirka Al-Beyraat ee dalka Turkiga lagu wareejiyey dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo soo xeray kulanka ayaa ugu horeyn ka hadlay in la ilaaliyo dhamaanba shuruucda kala gedisan ee dalka uu leeyahay waxaana uu xusay inuusan Golaha Shacabka u dul qaadan doonin bixinta hantida dalka guud ee ay Dowladdu leedahay oo aysan go’aankooda si gaar ah u qaadan karin mas’uuliyiinta xilalka loo dhiibay si taasi xal loogu helana la sameyn doono Maxkamad gaar uga shaqeysa.
Madaxweynaha Galmudug Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), ayaa sheegay in Sababaha uu Maamulka Puntland Colaadda uga hurinayo Gobolka Mudug uu yahay qorshe ah sidii uu u fashilmi lahaa Shirka Cadaado.
Xog: Axmed Madobe oo duulaan ku ah shirka beesha Sade ee gobolka Gedo
Wararka aan ka heleyno magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in Hoggaamiyaha Raaskambooni Axmed Madoobe uu wado qorsho dagaal ka dhan ah shirka ka furmaayo Gobolka Gedo.
Wararku waxa ay tibaaxayaan in Ujeedka dagaalka uu yahay mid looga soo horjeedo shirka halkaasi ka furmaayo.
Sidoo kale, wararku waxa ay intaa kusii darayaan in ku dhawaad 8 gaadiidka nooca loo yaqaan Cabdi-bilaha ay diyaar garoow ugu jiraan duulaan ay ku qaadan Gobolka Gedo, waxaana la soo warinayaa in Dagaalkaasi ay hogaamin doonaan Saraakiil kasoo jeeda Gobolka Gedo.
Qorshaha Weerarka ayaa kusoo beegmaya xili maalmo ka hor uu Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Jubba Gen. Fartaag ku goodiyay inay talaabo adag qaadi doonaan waa hadii shirkaasi la joojin waayay.
Fartaag waxa uu shirkaasi Gedo ku tilmaamay mid aan caafimaadka Jubba ku jirin, wuxuuna cadeeyay in mowqifkooda uu yahay dagaal lagu joojinaayo shirka.
Si kastaba, wararka qaar ayaa sheegaya in Fartaag uu afka un shirkaas ka mucaaradsan yahay, balse si hoose uu uga mid yahay dadka wax ka wada, mana cadda cidda uu Axmed Madoobe adeegsan doono, haddii ay caddaato in Faartaag uusan colaad ku hogaamin doonin tolkiisa.
Lama shaacin weli goorta uu duulaanka dhacaayo, balse warar hoose ayaa tilmaamaya inuu noqon doono mid lala kawsado shirka.
XOG: R/W C/WELI oo u tagaya Puntland
Ilo-wareedyo ka tirsan Xafiiska Ra’isulwasaaraha Dalka C/Weli Sheekh Axmed, ayaa xaqiijiyay in Raiisul wasaaraha maalmaha soo socda uu ku wajahan yahay Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Ujeedka socdaalka Ra’isul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in halkaasi uu uga qeyb geli doono wada-hadal u furmaya DFS iyo Maamulka Puntland oo mudooyinkaani isku khilaafsanaa Siyaasado hoose.
Madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa iminka ku howlan diyaarinta madashii lagu qaban lahaa shirka labada dhinac oo furmi doono horaanta bisha soo socota ee Octobobar.
Sidoo kale, Ra’isul wasaare C/weli ayaa horay u shaaciyay inuu gaari doono Magaalada Garoowe, isagoo hadalkaas ka sheegay xili uu ka hadlaayay Munaasabad soo dhaweyn ah oo loogu qabtay Landon todobaadkii lasoo dhaafay.
Socdaalka Ra’isul wasaaraha ayaa waxa uu sidoo kale xal ugu raadin doono Colaadaha xiligaani ka dhex aloolsan Maamulada Puntland iyo Galmudug, kaasi oo saan-saantiisa laga dareemaayo Magaalada Gaalkacyo.
Maamulka Puntland ee uu Madaxweynaha ka yahay C/weli Gaas, ayaa horay u shaaciyay inay jartay xiriirkii kala dhexeeyay Dowladda federalka Somalia, waana tan keentay in Ra’isulwasaare C/weli iyo Wafdi uu Hogaaminaayo gaaran Magaalada Garoowe.
QM oo lacag u diidday dal doonayey in uu magaca Soomaaliya lacag ku cuno
Qaramada Midoobay ayaa ku gacan seertay in magdhow ay siiso dowladda Uganda oo diyaarad dagaal ay uga burbureen labo sanno ka hor buuraha dalka Kenya. Uganda ayaa sheegtay in ay dooneyso lacag ay ku iibsato diyaarado kale, maadaama ay howl gal ka waddo Somalia.
Taliyaha ciidamada lugta ee Uganda, Katumba Wamala oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in QM ay ka diidday in magdhow ay ka siiyaan labo diyaarad oo nooca dagaalka kuwaasoo ku soo jeeday Soomaaliya ay ku burbureen bishii August ee sannadkii 2012 dalka Uganda.
Taliyaha ayaa tilmaamay in Qaramada Midoobaya ay kala kulmeen rajo been ku aadan in magdhow laga siiyo diyaarada ka burburay iyo 7-qof oo ku dhintay shilkaas kuwaasoo la socday diyaaradaha.
Diyaaradaha Uganda uga burburay dalka Kenya ayaa noocooda ahaa MI14, waxaana ay ahaayeen diyaarado dagaal oo la soo casriyeeyay iyadoona lacagtooda lagu qiyaasay 10-Milyan oo dollar.
Sida uu sheegay sarkaalka u hadlay dowladda Uganda diyaaradaha ayaa la rabay in ay ka qeyb qaataan dagaalka lagu jirro Al-Shabaab gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Uganda waa dalka ciidamada ugu badan ku deeqay howgalka Midowga Afrika ee AMISOM kuwaasoo hadda gaaraya 20 kun oo askari.
Howlgalka AMISOM ayaa horey u codsaday in la siiyo diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca si ay u dardar galiyaan dagaalka lagula jirro Al-Shabaab.
Xog: Ujeedka xildhibaano & ganacsato caan ah oo shalay Garbahaarey tagay
Wararka naga soo gaaraya degmada Garbahaareey ee gobalka Gedo ayaa sheegaya in halkaas ay shalay gaareen wafdi isugu jirta xildhibaanno iyo ganacsato kuwaasoo ka qeybgalaya shirka halkaas ka dhacaya.
Afhayeenka shirka Garbahaareey Cabdi Shire Jaamac (Cayaar Jecel)oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wafdiga yimid magaalada uu hor kacaayo xildhibaan Cabdinaasir Maxamed Garjeex iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda iyo ganacsato caan ah.
Wuxuu sheegay in wafdiga ka yimid Muqdisho ay qeyb ka yihiin ka qeyb galayaasha shirka ka dhacay Garbahaareey isagoona intaas ku daray in si weyn loo soo dhaweeyay wafdiga.
Mar la weydiiyay wax yaabaha dib u dhigay shirka oo lagu waday in uu furmo 20ka bishan, wuxuu tilmaamay in arrimo farsamo ay jiraan iyo xaaladdo abaaro oo gobalka meelo badan ka taagan kuwaasoo aan suurgalineynin in shirka uu qabsoomo.
Wuxuu sheegay oo kale in diyaaradaha keeni lahaa ergada qaar ay dib u dhaceen marka sidaas uu shirka dib ugu dhacay.
Si kastaba, maamulka Axmed Madoobe ayaa horrey uga digay dadka ku howlan shirka Garbahaareey in ay ka laabtaan go’aankooda oo wax shir la dhaho aanu lagu qaban karin magaaladaas.
Ma cadda sida shirka Garbahaareey uu ku dhici karo iyadoo uu jirro hanjabaad ka timid madaxweyne ku xigeenka maamulka kumeel gaarka ee Jubba Fartaag oo qudhiisa ka soo jeeda gobalka Gedo.
Dad badan ayaa aaminsan in shirka Garbahaareey uu culeys ku noqon doono shirka dib u heshiisiinta ee immanka ka socda Kismaayo.
Culeys soo Wajahay illaalada Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Muqdisho & Fariin adag oo kaga timid Wasiir Khaliif Ereg
Wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa amar culus dul dhigtay ilaalada shirkadaha gaarka loo lee yahay ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka, Maxamed Cismaan Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkadaha gaarka ay qasab ku tahay ilaalada u shaqeeya aaney u muuqaal ekaan ciidamada dowladda ama labiskooda ay qaataan.
Wuxuu sheegay oo kale in ilaalada shirkadaha loo ogol yahay kaliya qoriga AK47 ama qoriga soomaalida ay u taqaan AAKI isla markaana hub kale aaney qaadan karin.
“Ilaalada u shaqeeya shirkadaha gaarka loo lee yahay waxaa qasab ku ah in ay qaataan astaan gooni ah oo aan u ekeen kuwa ciidamada qaranka, waana loo oggol yahay kaliya AK47” ayuu yiri afhayeenka wasaaradda amniga.
Afhayeenka wasaaradda amniga wuxuu sheegay oo kale in ay wadaan qorshe lagu diiwaangalinaayo ilaalada shirkadaha gaarka isla markaana faraha laga qaadayo si loo ogaado dhaqdhaqaaqooda.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan meel marisay sharciga xakameynta hubka sharci-darrada waxaana sharcigaas uu horyaallaa baarlamaanka oo aan Wali la Meel Marin.
Deg Deg:- Galmudug oo Fasaxday Xayiraadii saarneyd Garoonka Gaalkacyo & Qaybdiid oo yiri
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo goor dhaw Shirjiraa’id ku qabtay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa ku dhawaaqay in Galmudug ay fasaxday Xanimaadii ay ku soo rogtay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo ee Puntland ay Maamusho.
Ujeedka Cabdi Qeybdiid Madaxweynaha Maamulka Galmudug uu u fasaxay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo ayuu ku sheegay Codsi uga yimid Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in la fasaxo Garoomada ku yaala Magaalada gaalkacyo islamarkaana la joojiyo Xiisada Gobolka.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi Qeybdiid ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay jabisay Amarkii Galmudug ee ahaa in Garoonka uu xiran yahay islamarkaana Galmudug ay garawsatay in Garoonka Xanimaada laga qaado oo Dadka Gobolka loo daneeyo sida uu yiri Qeybdiid.
Maalmahaan danbe waxaa jiray Khilaaf Xoogan oo u dhaxeeyay Maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku aadan Xanimaada Garoomada Magaalada Gaalkacyo.
Madaxweyne Xasan sheekh oo maanta dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii uu soo dhameysatay safar shaqo oo uu ku tegay dalka Mareykanka gaar ahaan shirkii loo dhamaa ee qaramada Midoobay.
XOG:- Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo qorshe adag damacsan
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliyaayaa xilligaan waxa uu damacsanyahay qorshe aan caadi ahayn xiili doorashada dalka Sanad iyo Xoogaa ay ka hartay.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dalalka Isku taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Uganda kulamo xasaasi ah kula yeeshay siyaasiin iyo sidoo kale Aqoonyahno Soomaaliyeed, waxaana ka marneen xubno ka mid ah Aalasheekh.
Xubnahaan waxyaabaha uu kala hadlaayay waxaa ka mid ah sidii isaga taageero xoogan uu u heli lahaa, waxaana uu doonayaa inuu noqdo musharax Madaxweyne.
Sanadka 2016-ka waxaa dalka laga filaayaa inay ka dhacdo doorasho, waxaana uu doonayaa Sheekh Shariif in uu xilkaasi ku guuleesto, islamarkaana Madaxweyne Noqdo.
Mukhtaar Rooboow oo ku dhawaaqay go’aan ka dhan ah Hogaamiyaha Al-shabaab (AKHRISO)
Waxaa soo ifbaxaayay is faham waa ka dhaxeeya Hogaamiyaha Cusub ee Al-shabaab Abuu Cubayda iyo sidoo kale Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur oo ka mid ah saraakiisha Al-shabaab.
Waxaa dhawaan fashilmay kulan xasaasi ah oo ay ku qaateen Labadaan shaqsi degmada Baraawe ee gobalka Sh/hoose, waxaana taasi ay keentay in il gaar ah la’isku haayo.
hadaba Mukhtaar Rooboow ayaa la sheegay in go’aan uu qaatay, soona saaray arimo ka dhan ah Hogaamiyaha Al-shabaab sida aynu xogtaan ku helanay.
Waxa uu sheegay in isaga hadda aanu diyaar u ahayn inuu la dagaalamo ciidamada AL-shabaab ah waliba Abuu Cubayda Amro, hase ahaatee hadii lasoo weeraro uu is difaaci doono.
Waxa uu sheegay in markaan wixii ka dambeeya aanu u dulqaadan doonin, xad gudubyo uu sheegay in ay ku hayaan Saraakiil Al-shabaab kamid ah.